Taariikhda My Butros » 12 Waa agteena Wixii Mrs. Right
1. Qofku hadduu yahay mid dareen xoog leh oo ku saabsan nolosheeda iyadoo la sii dheelitirnaan. Waxaa iyada xiriir jaceyl Noqo, qoyskeeda, iyada shaqada, nafteeda iyo iskaa wax-. Qofku hadduu yahay mid dareen ku saabsan dunida ku xeeran noolaa noloshooda loo waxyooday. Waxaan dhammaan isticmaali kartaa yar waxyi ah.
2. Qofka geesinimo inay u nuglaadaan marka loo baahdo iyo markii hal adayg lagama maarmaan. Waxay u doorta ilaa in la furo kuwa wax chemistry iyada la laakiin waa in xeero cad awoodi marka loo baahdo.
3. Qof aad adigu noqon karaa. Qofka ma boodaan xaakinka laakiin gaaraan si ay u fahmaan iyo soo saarid waa qof la mid ah oo ku heshiin karaan inay isku Khilaafeen.
4. Qof amaanta 3 duleella u xun oo ku saabsan iyo in aad amaan ay 3 duleella u sii xumaan. Dhinacle ah waa furaha. Raadi qof ku darsan kara noloshaada sida aad kuweed sameeyo. Liisas daalo Long aan la xorreeyo; waa inay celiyaan a at fiican.
5. Qof doorta in ay noqon halkii nooc ka badan xaq u. From mudalabka in qofka guri la'aan dariiqyada jibriil.
6. Qof isaga ku odhan kara, iyadu waa ka xumahay. Waxaan ka heli mid in doonitaanka inaad khaladkaaga qiran waa tallaabo weyn oo ku wajahan bogsiinta. Inta jeer, in uu yahay mid ku filan.
7. Qofku hadduu yahay mid conversationalist weyn. Kaliya waxaad Jeceshihiin ka hadlaya iyada maxaa yeelay, iyadu waa sidaas multi-jibaaxaysaa xiiso leh.
8. Qofku hadduu yahay mid maskaxeed cajiib ah. Waxay ku waydiiyo wax kasta oo, dan oo ku saabsan hagaajinta nafteeda iyo ma joojin barashada.
9. Qof kasta oo raba in ay dhex maraan wakhtiyada adag kula. Waxay leedahay kartida si ay idin garab taagnaano oo aad loo taageero marka ay arrimuhu ay koonfurta ka socda.
10. Qof haynaya wanaagsan ee xayawaanka guriga iyada. Waxay hubineysaa in ay yihiin kuwo caafimaad qaba, nadiif ah oo ku faraxsan. Haddii ay ayaa sheegay inay jecel yahay xayawaanka guriga iyada, laakiin waxay ku jiraan xaalad ah la jahawareersan, qiyaasi haddii ay aad u jecel yahay? Waxaad ka heli my miyigii.
11. Qofka si joogto ah sameeya wax yar oo aad u. Maalin ee maalin iyo baxay furitaankii of waxyaalahan u samaynaysaan ayaa sheegay in wax badan.
12. Qofka aragtida dhaqaale la mid ah. Waxaad doonaysaa in la dhiso mustaqbalka dhaqaale si aad ku raaxaysan kartaa xiriirka. Waxa la soo dhaafay aad rabto in aad samayso waa dagaal ku saabsan lacag.